Dawlada Tukiga oo sheegtay inaysan jirin cid ay kula tartamayso Soomaaliya | allsaaxo online
Dawlada Tukiga oo sheegtay inaysan jirin cid ay kula tartamayso Soomaaliya
Turkigu kula tartami mayo wadan kale isku dayga ah xallinta colaadaha Soomaaliya, sida waxaa yiri safiirka Turkiga ee fadhiya magaaladda Muqdisho.
“Waligeen kulama aanan tartamin cid kale Soomaaliya… Turkigu waxaa uu aaminaad iyo Jaceyl ka helay Soomaaliya tan iyo 2011” ayuu yiri Olgan Bekar oo la hadlay wakaaladda wararka ufaafisa wadanka Turkiga ee Anadol,
waxaa uuna diiday Sheegashooyinka ah in Turkigu uu ka mid yahay dhinacyada isku haya Soomaaliya.
“Turkigu boos sharafeed ayuu ku leeyahay Soomaaliya ayuu yiri” waxaa uuna intaas ku daray in u jeedada Turkigu ay tahay in uu caawiyo Dadka Soomaaliyeed uuna ka saaro xanuunka ay la dhibtoonayeen tan iyo 1991-kii.
Waxaa jiray Qoraallo lagu sheegay in Turkigu uu ka mid yahay Wadammo Soomaaliya ku hardamaya wixii ka dambeeyay Markii uu sanad iyo bilooyin ka hor soo billowday khilaafka u dhexeeya Dowladaha khaliijka.
Imaaraadka Carabta iyo Sucuudiga oo saf ah iyo Qadar iyo Turkiga oo dhanka kale ah ayaa la sheegay in uu hardankaasi u dhaxeeyo.
Afarta Dowladood saameyn ayey ku leyihiin Soomaaliya, waxaana jira dano is xulufeysi ah iyo kuwo ay doonayaan in ay si gooni gooni ah uga gaaraan Soomaaliya.
“ma dooneyno in cidina ay si toos ah usoo faragaliso arrimaha gudaha Soomaaliya, waxaan dooneynaa in dalalku ay door dhisme ciyaaraan” ayuu hadalkiisa kusii daray Safiirka Turkiga ee Soomaaliya.
Mar uu soo hadal qaaday taageeradda Turkiga uu siiyo Soomaaliya ayuu aad u faahfaahiyay taageeradda militari ee Turkigu uu siiyo Soomaaliya wuxuuna ka sheekeeyay saldhigga Turkigu uu Muqdisho ku leeyahay iyo sida uu u caawinayo Ciidamada Soomaalida.
Waxaa uu sheegay in ay Caawimaad ka geysanayaan sidii Soomaaliya ay uga maarmilahayd AMISOM oo dalka ka shaqaynaysay tan iyo 2007dii.